Avengers: Endgameမှာတောာ့ Russo brother ကနောက်ဆုံးတော့အချိန်အကြာကြီးဖွက်ထားခဲ့တဲ့ trailer ကြီးနောက်ဆုံးတော့ထွက်လာခဲ့ပါပြီ..။ဇာတ်လမ်းအစမှာ Tony ကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူ့ကိုကြည့်ရတာတော့မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ပုံပါ။ သူကတော့အချစ်ဆုံးလေး pepper ကို ပြန်ပေးဖို့ message လေး recording လုပ်နေပါတယ်။ သူစီးနေတဲ့ spaceship က GOTG ရဲ့ ship မဟုတ်လောက်သလို donut ship လဲမဖြစ်နိုင်ပါဖူး။ သူ့အခြေအနေကတော့တော်တော်ဆိုးရွားနေပါပြီ။ အစာနဲ့ရေပြတ်သွားတာလေးရက်ရှိပါပြီတဲ့ Oxygen ကလည်း မနက်ဖြန်မနက်ဆိုကုန်တော့မှာပါ။ အဲ့တော့ Tony လေးကိုဘယ်သူလာကယ်မလဲ ?? Titan မှာ tony နဲ့အတူကျန်ခဲ့တဲ့ Nebula ကတော့ GOTG ship ပေါ်မှာပါ။ အဲ့တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာလို့အတူမရှိတာလဲ ?? Space ပေါ်မှာတော့ Tony အခက်တွေ့နေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာရော? Cap နဲ့ Black widow အခက်တွေ့နေပါတယ် ။ ကမ္ဘာမှာ living creature အကုန်ရဲ့ တစ်ဝက်တိတိပျောက်သွားလို့ခြောက်ကပ်နေပါတယ်။ Cap လဲငိုနေတယ်ဆိုတော့ Buck နဲ့ Tony နှစ်ယောက်လုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့လား ? Burce banner ကြီးကတော့ ပျောက်သွားတဲ့ SH တွေကိုစာရင်းပြုစုနေတယ်လုိ့ယူဆရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက Cap နဲ့ BW ကတစ်ခုခုကြံနေပါတယ်။ဘာကြံနေတာလဲ? Japan ကိုရောက်နေတဲ့ Ronin ကြီးကိုလဲတွေ့ရပါပြီ။ သူကတော့ မိသားစုဆုံးရှုံးထားရလို့ အရမ်းနာကြည်းနေပုံပါပဲ။ BW နဲ့ battle ဖြစ်ဦးမလားတော့မသိပါဖူး။ ပြီးတော့ Scotty လေးသူကတော့ပျော်ပျော်ပါပြဲကည့်ရတာသူ့မိသားစု Snap က လွတ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ Cap တို့အိမ်တံခါးကိုလာခေါက်ပြီး Can you buzz me in တဲ့။Thor ကရောဘာလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတာလဲ? End game က Infinity war ထက်တော်တော်ကြီးကြမ်းမယ်ကားပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ...။
ဒါရိုက်တာ Anthony Russo, Joe Russo